ကပျပါပေ့ ပီကရေယျ: အသစ်၊ အဟောင်း နှင့် မပြောင်းလဲသော ...
အသစ်၊ အဟောင်း နှင့် မပြောင်းလဲသော ...
မနှစ်က ဒီလို အချိန်လောက်မှာပဲ ကျနော့ဆီ ဧည့်သည်တစ်ယောက် ရောက်လာခဲ့တယ်။ သူ ကျနော်နဲ့ အတူ အချိန် အတော်လေးကြာကြာ ရှိနေခဲ့တယ်။ သူရောက်လာမယ်ဆိုတော့ ကြိုတင် အသိမပေးရပေမယ့် သိနေနှင့်တယ်လေ။ သူ့တစ်ယောက်စာအတွက် ကျနော့်မှာ ဝန်မပိုပါဘူး။ အခု ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့မှ သေချာပြန်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ အော် ... သူရောက်ခဲ့တာ တစ်နှစ်တောင် ရှိသွားပါ ပကောလား လို့ တွေးမိတယ်။ သူရှိနေတဲ့ အချိန်တွေကို တန်ဖိုး မထားခဲ့တာ မဟုတ်ပေမယ့် ဂရုမပြုမိတာတော့ အမှန်ပဲလေ။ သူ ဘေးနား ရှိနေတဲ့ အတောအတွင်းမှာ ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့တာတွေ ရှိသလို ဆုံးရှုံးသွားတာ တချို့လည်း ရှိတယ်။ အခု ပြန်တော့မယ် ဆိုတော့လည်း မျက်ရည်မကျမိတာ အမှန်ပါပဲ။ ကိုယ်နဲ့ တစ်နှစ်လုံးလုံး လက်ပွန်းတတီး ရှိနေခဲ့တဲ့ ဧည့်သည်တစ်ယောက် ပြန်သွားခဲ့ရင် လူတိုင်း အနည်းနဲ့အများတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိမယ်။ မဖြစ်ရင်တော့ ရင်ထဲ ဟာတာတာတော့ ဖြစ်သွားကြတယ်။ အခုတော့ ဒီ ဧည့်သည်ပြန်မယ် ဆိုတာကို သိကြတော့ ဝမ်းမနည်းကြတဲ့အပြင် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတောင် လုပ်လိုက်သေး။ အော် ... လူ၊ လူ။ အသစ်ကို ကြိုဆိုချင်လို့ အဟောင်းကို မေ့ချင်ယောင် ဆောင်လိုက်ကြတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့လည်း ဘယ်မေ့နိုင်ပါ့မလဲ။
တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ လူတစ်ယောက် သမ္မတ ဖြစ်မသွားနိုင်ပေမယ့် ဒီတစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းအခြားထဲမှာတော့ လူတစ်ယောက်မက သမ္မတ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ ဧည့်သည်က သူ ဒီနေ့ ပြန်ပါတော့မယ်လို့ မနှုတ်ဆက်ပေမယ့် ကျနော် သိနှင့်နေတယ်။ သေချာတာ သူ ဘယ်သူ့ကိုမှ နှုတ်ဆက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးကလည်း နောက်လာမယ့် ဧည့်သည်ကိုပဲ မျှော်နေကြမှာလေ။ သူ သိလေတော့ ဆိတ်ဆိတ်လေးပဲ ထွက်ခွာသွားတော့မယ့် ပုံပါ။ ဒါပေမယ့် သူ နောက်ဆုံး စက္ကန့်ပိုင်းအထိတော့ ကျနော်တို့ အနားမှာ သူ ရှိသွားနိုင်ခဲ့တယ်။ သူ့တာဝန် မလစ်ဟင်းခဲ့ပေမယ့် ကျနော်တို့ သူ့ကို လစ်လျူရှုမိခဲ့တယ်။ ပြန်ခါနီးမှ အော် ပြန်တော့မှာပါလားလို့ သိတဲ့လူတွေ ရှိသလို သိတောင် မသိလိုက်တဲ့သူတွေ ဘယ်လောက် များလိုက်မလဲနော်။ ထားပါ။ အနည်းဆုံး ကျနော်ကတော့ သူ့ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ချင်တယ်။
ကျနော် သိသလောက် အပြောင်းအလဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူ သုံးမျိုး ရှိပါတယ်။ တချို့က အသစ်ကို ကြိုဆိုပြီး အဟောင်းကို မေ့လိုက်တယ် (အတင်းအကျပ်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်)။ တချို့က အဟောင်းမှာ တဝဲဝဲ လည်နေပေမယ့် အသစ်ကိုလည်း ကြိုဆိုလိုက်တယ် (ဝတ်ကျေတမ်းကျေလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်)။ အများစုကတော့ ကုန်သွားတဲ့ အဟောင်းကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း အသစ်လာမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး။ ကျနော်က ဘယ်လို လူမျိုး ဖြစ်မယ်ထင်လဲ။ တကယ်တော့ ကျနော်ဟာ ဘီယာရယ်၊ အချိုရည်ရယ် နဲ့ အမြည်းရယ် သုံးခု ရောယှက်ထားတဲ့ ယမကာဝိုင်းလေးပါ။ သောက်နေကျ ဘီယာကလွဲလို့ တခြား ဘယ်ဘီယာမှ မပြောင်းချင်ပေမယ့် အချိုရည်ကိုတော့ ဆိုဒါ မရရင် ကိုလာ၊ ကိုလာ မရရင် ပါဝါ၊ ပါဝါ မရရင် လိမ္မော် ဆိုပြီး အဆင်ပြေသလို သုံးဆောင်နေမိတယ်။ အမြည်းကတော့ ဘားဂျက်ပေါ်မှာ မူတည်သလို၊ သုံးချင်စိတ်ပေါ်မှာလည်း မူတည်တာပေါ့။ မလျှံရင်တော့ ကန်စွန်းရွက်ကြော်လေးပေါ့။ ဒီထက်မှ အခြေအနေဆိုးရင်လည်း မြေပဲစေ့နဲ့တင် အဆုံးစီရင်လိုက်တယ်။ လျှံပြီ ဆိုရင်တော့လည်း ငုံးကင်လား၊ ယုန်ကြော်လားပေါ့။ ကျနော်ရဲ့ အယူအဆက အဲ့ဒီ ယမကာဝိုင်းလေးအတိုင်းပါ။
ကဲ ... သူပြန်တော့မယ် ဆိုတော့ မပြန်ခင် သူနဲ့ စာရင်း ရှင်းမှ ဖြစ်မယ်။ အချုပ်စာရင်းကို မရှုပ်မရှင်း အထုပ်ခင်းပြရရင် ...
ကျနော် နှင့် အလုပ်
တကယ်ကို အလုပ်များတဲ့ နှစ်တစ်နှစ် ဆိုပေမယ့် အလုပ်တော့ တအား ရှုပ်နေပါဘူး။ တစ်ခါတလေတော့လည်း အရှုပ်လုပ်ရင်း အလုပ်ရှုပ်သွားတတ်တယ်။ အလုပ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အလုပ် သုံးခု ခွဲပြောပါ့မယ်။ လူတစ်ယောက်က တစ်နေ့တာအတွင်းမှာ အလုပ်သုံးခုထဲက တစ်ခုခု အလုပ်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်တဲ့။ ပညာရတဲ့အလုပ်၊ ဥစ္စာရတဲ့အလုပ်နဲ့ ကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်၊ အဲဒီအထဲက တစ်ခုခု လုပ်ဖြစ်မှ အဲဒီနေ့အတွက် တန်ဖိုးရှိမယ်တဲ့။ ပညာရတဲ့ အလုပ်အနေနဲ့တော့ စာများများ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင် စံချိန်ကို မမီပေမယ့် မနှစ်ကထက် စာရင်တော့ အတော်လေး ဖတ်ဖြစ်တယ်။ မနှစ်က ဘလော့ဂ်များများ ဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် ဒီနှစ် စာအုပ်များများ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ မျက်စိနာမကျန်း၍ လည်း ပါပါတယ်။ ဥစ္စာရတဲ့ အလုပ်ကတော့ ရုံးအလုပ်ပေါ့ဗျာ။ ပုံမှန်လည်ပတ်နေတဲ့ ဝင်ငွေကလွဲလို့ တခြား အပိုစာသား ဘာမှ မရခဲ့ပေမယ့် ဆုံးရှုံးမှုတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကုသိုလ်ရမယ့် အလုပ်ကတော့ ထင်သလောက် မှန်းသလောက် မလုပ်ဖြစ်နေဘူး။ ကုသိုလ်တချို့ စရံသတ်ထားတာတော့ ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနစ်အတွင်းမှာ ပညာလိုအပ်တဲ့ လူတွေကို တတ်နိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်ကနေ ပေးနိုင်တဲ့ အချိန်နဲ့ သင်နိုင်သလောက် သင်ပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ အစီအစဉ်တချို့လည်း စိတ်ကူးနဲ့ ဆွဲကြည့်နေတယ်။ ပဏာမ လေ့လာမှုတချို့လည်း လုပ်နေပါတယ်။ ကျနော့်ကို ကုသိုလ်တွေ လက်ဆောင်ပေးချင်သူများ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ဘက်က ပညာနဲ့ ပြန်လည် ပေးဆပ်ပါ့မယ်။ တစ်ခါတလေကို ကုသိုလ်ပေးဖို့ ဆိုတာ ငွေ လိုတယ်မဟုတ်လား။ ပေးသူနဲ့ ယူသူ လမ်းကြောင်းဖြောင့်ဖို့ တစ်ခါတလေတော့လည်း ငွေခင်းနေရသေးတယ်။ ငွေ ငွေ ငွေ ဆိုတာလည်း ထည့်စဉ်းစားနေရတော့ အစီအစဉ်က မသွက်လပ်။ ပညာ့အလှူအနေနဲ့ သင်ပေးချင်တဲ့ သူ တချို့ ရှိသလို ပညာ့အလှူ ခံယူချင်တဲ့ လူတွေလည်း ရှိနေတာ သိရတယ်။ ပေးသူနဲ့ ယူသူကို သွယ်တန်းဖို့ဆိုတာ ငွေကလည်း အခရာ ကျနေပါတယ်။ ဒီတော့ ငွေအလှူ ဆိုတာလည်း ထပ်လိုလာတာပေါ့။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ပတ်ဝန်းကျင် လှပဖို့ ဆိုတာ တစ်ယောက်တည်း ကောင်းလို့ မရဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်လှဖို့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကျနော်လည်း ပါဝင်လှုပ်ရှားဖို့ လုပ်နေပါတယ်။
ကျနော် နှင့် မေတ္တာစက်ဝန်း
ရွှေဧည့်သည် ကျနော့်အနားမှာ ရှိနေခဲ့ပြီး ၁၃ ရက် (ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက်) အကြာမှာ ကျနော်ရဲ့ ညာဘက်လက်ကလေး နွေးကနဲ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ အခုထိလည်း နွေးထွေးနေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့်လည်းလေ ၅၆ ရက် (ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်) အကြာမှာတော့ ကျနော်ရဲ့ ဘယ်ဘက် ရင်ဘတ်တစ်ခြမ်း ဟာကနဲ ဖြစ်သွားပြန်တယ်။ လူတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ ဘဝမှာ အရာရာဟာ မျှခြေ ဖြစ်နေရမယ်၊ မျှခြေ ဖြစ်အောင်လည်း သဘာဝက အလိုအလျောက် ထိန်းညှိတတ်တယ်လို့ ကျနော် နားလည် ထားပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ရဲ့ မေတ္တာစက်ဝန်းမှာ မျှခြေညီဖို့ Balance ဖြစ်ဖို့အတွက် ဝင်လာတဲ့တစ်ယောက်အစား ရှိပြီးသား တစ်ယောက်ကို နုတ်သွားတယ်ဆိုတာတော့ ဘယ်လို တရားနဲ့ ဖြေရပါ့။ အင်းး မဖြေတော့ပါဘူး။ အဖြေမှ မရှိဘဲ။ နောက်ပြီးတော့ ဒီတစ်နှစ် အတွင်းမှာပဲ ကျနော်ရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်း သုံးယောက်၊ ကျနော်ရဲ့ ဟိုးး အဝေး ... မမြင်နိုင်တဲ့ တစ်နေရာကို ရောက်သွားကြတယ်။ ( သေတာ မဟုတ်ဘူးနော်၊ စလုံးကို ရောက်သွားတာ ;P) အော် ..... ရောက်ရာအရပ်မှာ ပျော်နိုင်ပါစေသောဝ်။
ကျနော် နှင့် သူငယ်ချင်း
လူတချို့က ရည်းစားတွေ ထည်လဲတွဲပေမယ့် ကျနော်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေ ထည်လဲထားတတ်ပါတယ်။ ဟောတစ်ယောက် ဟောတစ်ယောက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ဝင်ပြီးကတည်းက သူငယ်ချင်းဦးရေက နှစ်စဉ် အနုတ်ပြနေပါတယ်။ မခင်လို့ ထွက်သွားကြတာ မဟုတ်ပေမယ့် ကျနော်နဲ့ အဝေးတစ်နေရာကို ရောက်သွားကြတော့ အနုတ်ပြသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ မန်းမှာ နှာချေးသုတ်ဖက် ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ ရှိပေမယ့် ကိုယ်က ရောက်နေတာ ရန်ကုန်ဆိုတော့ ဖုန်းနဲ့ပဲ ဆက်သွယ်ဖြစ်တော့တယ်။ မုံရွာမှာ ကျောင်းတက်တုန်းက ခင်ခဲ့ရတဲ့ ဖဲရိုက်ဖော် ရိုက်ဖက်တွေနဲ့လည်း အဆက်အသွယ်က မရှိသလို ရှိသလို။ ရန်ကုန်က ဝါးဖော်စားဖက်တွေကလည်း အသီးသီး အသကာ့ အသကာ့ မမြင်ကွယ်ရာမှာ ဘာတွေ လုပ်နေကြလဲ မသိ။ မမီတော့ ဒီစာဖတ်ပြီး ဂျိုပေးနေလောက်ပြီ :)။ ၂၀၀၈ ဆိုတဲ့ ဂဏန်း ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်က အဖြစ်အပျက်တချို့ကို မျက်လုံးထဲ ပြန်မြင်ယောင်လာမိတယ်။ ကတိ ဆိုတာကနေ အမှတ်တရ အဖြစ် ပြောင်းသွားတယ်လို့ပဲ ယူဆလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် လျှောက်နေကြရင်းနဲ့ ဆုံဖြစ်ဖူးတဲ့ ဇရပ်အိုမှာ ပြန်လာစုဖို့ ဆိုတာ တကယ်တော့ ကလေးအတွေးပါလေ။ လမ်းကြောင်း မလွဲချင်လို့ လှည့်မလာနိုင်သူ ရှိသလို လမ်းကြောင်းပျောက်နေလို့ လှည့်မပြန်နိုင်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိကောင်းရဲ့ လို့ပဲ တွေးလိုက်မိပါရဲ့။
ကျနော် နှင့် ဘလော့ဂ်
ကျနော်ကိုယ်တိုင် မရေးနိုင်၊ မလည်ဖြစ် မဖတ်အားလေတော့ ဘလော့ဂ်က ပထမ ခြောက်လမှာ ခြောက်ကပ်နေတယ်။ နာဂစ်အလွန် မီးတွေ ပြန်လာမှ ဘလော့ဂ်ဘက်လည်း ပြန်လှည့်နိုင်တော့တယ်။ ဒီတစ်နှစ်လုံး အနေနဲ့ ကျနော် ပို့စ်ပေါင်း (၇၄) ပို့စ်ပဲ တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အတော်လေး အားရမိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ ပို့စ်တွေ အထဲမှာ ကျနော် ပေါ့ပေါ့တန်တန် ရေးထားတဲ့ ပို့စ် တစ်ပုဒ်မှ မပါလို့ပါ။ မြန်မာစာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ် (၁၄) ပုဒ် ရေးဖြစ်ခဲ့သလို ကျနော် သိပ်ဝါသနာပါတဲ့ တွေးခေါ်ခြင်း အတွက် ဦးနှောက်အစာ တွေးစရာ ပို့စ်ပေါင်း (၂၃) ပုဒ် တင်ပြခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် ရေးတဲ့ စာတွေကို မငြီးမငြူ လာဖတ်ပေးကြတဲ့ စာဖတ်သူတွေကိုလည်း အရမ်းအရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့လည်း ကျနော်အနေနဲ့ တစ်ခုတည်းသော ကျေးဇူးဆပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းအရ ပို့စ်ကောင်းတွေ တင်ပေးဖို့ပဲ အမြဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ တချို့ ပို့စ်တွေကို ရေးတော့မယ်ဆိုရင် ပြင်ဆင်တဲ့ အနေနဲ့ ကျနော် စာအုပ်အတော်များများကို ရှာဖတ်ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သမိုင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပို့စ်နဲ့ မြန်မာစာပေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပို့စ်မျိုးတွေပါ။ ကိုယ်က ဝေမျှ ပေးကမ်းသူ ဆိုတော့ ပေးတဲ့အရာထဲမှာ အနာမပါစေချင်သလို အပုတ်လည်း ပါမသွားစေချင်ဘူး။ ဒီတော့ စာအုပ်ခပ်များများ စီစစ် ဖတ်ရှုပြီးမှ တင်ဖြစ်တယ်။ ဒီပို့စ်နဲ့ အတူ ကျနော်အတွက်လည်း များများ ကျန်သွားပါတယ်။ ကျနော် ခံယူထားတာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျနော် စိတ်ပါလက်ပါ ဖတ်လျက်နဲ့ စာကို နားမလည်ဘူးဆိုရင် အဲဒီစာကို ရေးတဲ့သူ ကိုယ်တိုင်က ကောင်းကောင်း နားမလည်လို့ လို့ ယူဆထားပါတယ်။ အဲဒီအယူနဲ့ အတူပဲ စာဖတ်သူတွေ နားလည်လွယ်အောင် ကျနော် ရေးတဲ့သူ ကိုယ်တိုင် ကောင်းကောင်း၊ ဂဃနဏ နားလည်အောင် ကြိုးစားပြီးမှ ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကျနော် နားမလည်သေးတဲ့စာဆို မရေးပါဘူး။ ဖတ်ရတဲ့သူလည်း ဖတ်ပြီး နားလည်မှာ မဟုတ်မှန်း ကြိုသိနေလို့ပါ။ နားမလည်နိုင်တဲ့ စာကို ဖတ်ပြီး အချိန်တွေ အချီးနှီး ကုန်အောင် လုပ်လိုက်မိမှာလည်း တအား စိုးရိမ်မိတယ်။
ဒီတစ်နှစ်အတွင်း ကျနော် ရေးထားသမျှထဲက အားအရဆုံး ပို့စ်တွေကို ပြောပါ ဆိုရင်တော့
ဘာသာပြန်ထဲက ကြွက်ထောင်ချောက် နဲ့ သစ်သားဇလုံလေး
ကိုယ်တိုင်ရေးထဲက စည်းကမ်းမှသည် ... ဥပဒေဆီသို့
ဟာသထဲက ဉာဏ်ကြီးရှင်ရဲ့ ပဲကြီးလှော်တစ်ဆုပ်
အချစ်အကြောင်းထဲက My Other Half နဲ့ နှုတ်ဆိတ်နေသော အချစ်
သမိုင်းအကြောင်းအရာထဲက မြန်မာအစ ???
ခရီးသွားမှတ်တမ်းထဲက အရှေ့သို့လားသော် (၁)၊ (၂)၊ (၃)
ဒီနှစ်ထဲမှာ pikay.myanmarbloggers.org အပြင် နောက် ဘလော့အသစ် သုံးခုလည်း လုပ်ဖြစ်ပါသေးတယ်။ နှစ်ခုက ကျနော် တစ်ယောက်တည်းကနေ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး လုပ်နေပေမယ့် ကျန်တစ်ခုကတော့ အားလုံးရဲ့ တတက်တအား ပါဝင်မှုနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။
ဘလော့ဂ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်၊ တည်ဆောက်ပုံတွေကို ရှင်းပြထားပေးတဲ့ How to BLOG !!! မှာ Blogger.com အတွက်ကိုပဲ အဓိက ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
စာရေးသူတွေအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါတဲ့ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်းကို ဘလော့ဂ်တစ်ခုအနေနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ဖတ်ရှုလို့ရအောင် စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လိပ်စာက http://myanmarwords.pikay.org ပါ။ Myanmar Orthography လို့ မခေါ်ဘဲ Myanmar Words လို့ သုံးထားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက (၁) မှတ်ရလွယ်လို့ နဲ့ (၂) အဘိဓာန် အဆင့်အထိ ရောက်အောင် သွားဖို့ စိတ်ကူးထားလို့ပါ။
ဘလော့ဂါမှန်သမျှ တက်ခံရဖူးသလို တက်ဖြေဖူးကြမှာပါ။ အဲဒီ တက်ပို့စ်တွေ အားလုံးကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖတ်လို့ ရအောင် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ http://tags.pikay.org မှာ TAGs Blog တစ်ခု ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ တချို့က ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ဂ်မှာ တက်ပို့စ် တင်ရင် အလွတ်တန်း စာဖတ်သူကို ထိခိုက်တယ်လို့ ယူဆသူတွေအတွက် မိတ်လည်း မပျက်ရအောင် ကိုယ့်ခံယူချက်လည်း မထိခိုက်အောင် TAGs Blog မှာ လာတင်လို့ ရပါတယ်။ ဘလော့ဂါ မှန်သမျှ ဘယ်သူမဆို လာတင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်နှစ် ကျနော်အတွက် မှတ်လောက်သားလောက်တဲ့ ဝေါဟာရကတော့ "ကိုင်တွယ်" ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါပဲ။ ကျနော်ပဲ အသုံးမှားသလား ဆိုပြီး အဘိဓါန်ထဲ သွားကြည့်မိပါတယ်။ ကိုင်တွယ် - စီမံဆောင်ရွက်သည် လို့ အဓိပ္ပာယ်ရကြောင်း ရှင်းပြထားတယ်။ ကိုင်ပြီး တွယ်မှာ မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစကားလုံးကို အတော်လေး နာကျည်းခဲ့ကြတယ်။ ဒါကို ဘာသာဗေဒပညာရှင်တွေက ဘာသာစကားရဲ့ အားနည်းချက်လို့ ဆိုပါတယ်။ စကားလုံးတစ်လုံးစီဟာ ခံစားမှု နဲ့ အရည်အသွေးကို တင်ပြနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ မူလရည်ရွယ်ညွှန်း အဓိပ္ပာယ်နဲ့ သွေဖည်သွားပါတယ်။ ဥပမာ ကျနော် ပြောပြမယ်။ "ကောင်းတယ်" လို့ ရေးထားတဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးဟာ မူလအဓိပ္ပာယ် ကောင်းခြင်းကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သလို မကောင်းခြင်းကိုလည်း ကိုယ်စားပြုသွားတာ တွေ့ရတယ်။ စိတ်ကြည်လင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်က "ကောင်းတယ်" လို့ ပြောတာ ကောင်းခြင်းကို ရည်ညွှန်းပေမယ့် မကြည်လင်သူ တစ်ယောက် ပြောတဲ့ "ကောင်းတယ်" ဆိုတာ မကောင်းခြင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်သွားတတ်တယ်။ ကိုင်တွယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ကျနော့်အတွက် Word of the year ပါ။
ကျနော် နှင့် ဘလော့ဂ် သုံးသပ်ချက်
၂၀၀၈ ဆိုတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ တိုးလာတဲ့ ဘလော့ဂ် အရေအတွက်ဟာ အရင် ရှိနှင့်ပြီး အရေအတွက်ထက် နှစ်ဆ ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ ဒါ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာလို့ ပြောမလား။ ကောင်းရာကို ဦးတည်နေတာပဲဆိုတော့ ကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဆ တိုးတယ် ဆိုတာထက် ပိုပြီး နှစ်ထောင်းအားရ ဖြစ်မိတာက Professional Blog တိုးပွားလာခြင်းပါ။ ကောင်းတဲ့ profession ပညာရပ်နဲ့ ရပ်တည်တဲ့သူ ရှိသလို ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ ဘလော့ဂ်တချို့ ပေါ်လာတာလည်း တွေ့ရတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဆန့်ကျင်တာနဲ့ မကောင်းဘူးလို့တော့ ကျနော် မယူဆဘူး။ သူ့ရဲ့ Intension (ဦးတည်ရာ) ကိုပဲ ကျနော် ကြည့်ချင်တယ်။ ဥပမာ Porn Blog ဆိုပါတော့။ ဟိုဖော်ဒီဖော် ပုံတွေကို တင်ထားတဲ့အပြင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာပေး တွေပါ တင်ပေးနိုင်ရင် ဒီဘလော့ဂ်ကို ကျနော်တို့ အသိအမှတ် ပြုရမယ်။ နောက်ပြီး အသုံးအဆောင်၊ ဆေးဝါး ဒါမျိုးတွေကို ဖော်ထုတ် တင်ပြပေးနိုင်ရင် ဒါ ပညာပေးလို့ပဲ ယူဆတယ်။ အရိယာမဟုတ်တဲ့ လူတွေက ဘယ်သူကကော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်ကင်းနိုင်မှာလဲ။ ကျနော် ဒါမျိုးဘလော့ဂ်တွေ လုပ်ဖို့ အားမပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မကန့်ကွက်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရှိသင့်တယ်လို့ ယူဆမိလို့ပါ။ ပညာပေးမယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆိုရင်ပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါမျိုးဘလော့ဂ်က ရှားသားဗျ။ မျက်စိအစာကျွေးရုံ သက်သက် ဆိုရင်တော့ အပင်ပန်းခံပြီး ပုံတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ Upload လုပ်မနေပါနဲ့ လို့ပဲ တောင်းဆိုပါရစေ။
ကျနော် မြင်သလောက် နောက်တစ်ခု ပြောရရင် ဘလော့ဂ်အတော်များများမှာ ကဗျာပို့စ်တွေကို လူအများဆုံး လည်တာ တွေ့ရတယ်။ ပညာရပ်ဆန်လေလေ ဖတ်မယ့်သူ မရှိလေလေပါပဲ။ ဒါ အင်မတန် ဝမ်းနည်းဖို့ ကောင်းတဲ့ တွေ့ရှိချက်ပါ။ အငှားရဆုံး မဂ္ဂဇင်းဟာ ဂမ္ဘီရဆိုင်ရာ မဂ္ဂဇင်းတွေလို့ သိလိုက်ရရင် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားမှုအတိုင်းပါပဲ။ ကဗျာဖတ်တာ မကောင်းဘူးလို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Emotion နဲ့ Intelligence နှစ်မျိုးလုံး ဘက်မျှနိုင်မှ တိုးတက်မှု ရနိုင်မယ်လို့ ယူဆမိလို့ပါ။ ပညာပေးပို့စ်တွေထက် ခံစားမှုဆိုင်ရာ ပို့စ်တွေမှာ လူတွေဟာ အများဆုံး အချိန်ပေးနေတာ တွေ့ရလို့ပါ။
နောက်ပြီး ဘလော့ဂ်တွေမှာ မသမာမှု တချို့ တွေ့ရပါတယ်။ မသမာမှုဆိုတာ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖောက်ပြန်တဲ့ အပြုအမူပေါ့။ သူများ ရေးထားတာတဲ့ စာကို ကိုယ်ရေးထားသယောင်ယောင် တချို့ တင်ကြပါတယ်။ မြင်လို့ သိတဲ့သူ သွားပြောတော့လည်း မသိချင်ယောင် ဆောင်တတ်ကြသေးတယ်။ နောက်ပြီး ဆက်စပ်နေတာက Forward Mail တွေ။ စပို့တဲ့ သူတွေက ဘယ်သူဘယ်ဝါ ရေးတယ်လို့ မရေးထားတော့ ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ တဖြည်းဖြည်း ကြာလာတော့ Anonymous ဖြစ်သွားတယ်။ အမည်မသိ ခေတ်စာဆိုပေါ့။ တချို့ ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ပို့စ်မှာ ကောက်တင်တယ်။ တင်တဲ့သူကတော့ ဝေမျှချင်တဲ့ ဆန္ဒ သက်သက်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာတချို့ တက်တာ တွေ့ရတယ်။ အခုလို ဖြစ်တာ မေးလ်စပို့တဲ့ သူတွေမှာ အဓိက တာဝန်ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခု မသမာဘူးလို့ ထင်ရတာ Hit Count ၊ ဘလော့ဂ်စရေးတာမှ မကြာသေးဘူး။ Hit Count က တစ်သိန်း ကျော်နေပြီ။ တစ်ခါတလေ ဝင်ကြည့်တိုင်း Online User တစ်ယောက်တည်း ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ လာကြည့်တဲ့ Page အရေအတွက် တစ်သိန်း ကျော်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ယူဆမိတယ်။ ရိုးသားမှုက လုပ်ယူရတာ မဟုတ်ပေမယ့် မရိုးသားမှုကတော့ အတင်း လုပ်ယူရင်း ဖြစ်သွားတာပါ။
ကျနော် နှင့် စကားတစ်ခွန်း
ကျနော် ဘာကောင်မှ မဟုတ်ပေမယ့် သာမာန်လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ စကားတစ်ခွန်း ပြောပါရစေ။
"ဘလော့ဂါများ အားလုံး စည်းလုံးကြပါ။ စည်းရုံးကြပါ။"
လောကမှာ တစ်ယောက်တည်း လုပ်လို့ရတဲ့ အလုပ်ဆိုတာ သိပ်မရှိပါဘူး။ ထမင်းစားတာ၊ အိပ်တာ တစ်ယောက်တည်း လုပ်လို့ရတာပဲလို့ စောဒက တက်စရာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ရန်သူတွေ ကြားမှာ တစ်ယောက်တည်း ထမင်းစားဖို့ စိတ်ဖြောင့်ပါလား။ နောက်ပြီး တောထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း အိပ်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလို၊ လူအများကြားမှာ ဆူညံနေရင်လည်း အိပ်မရပါဘူး။ စကားကပ်ပြောတယ် မထင်ပါနဲ့။ အမှန်တရားပါ။ ကဲဗျာ ရေးတာလည်း အတော်လေး ရှည်နေပြီ။ ကျနော်နဲ့ တစ်နှစ်တာ အတူတကွ ကျော်ဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ကိုလည်း နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အသင်နဲ့ နေရာလဲမယ့် ၂၀၀၉ နဲ့လည်း တည့်အောင်ပေါင်းပါ့မယ်လို့ ကတိပေးတယ်ဗျာ။ ဟုတ်ပြီလား။
Wednesday, December 31, 2008 | စာညှနျး About Me, ရောက်တက်ရာရာ
ဤပို့စ်အား Wednesday, December 31, 2008 နေ့တွင် ရေးသားထားပြီး About Me , ရောက်တက်ရာရာ နာမည်ဖြင့် အညွှန်း သက်မှတ်ထားပါသည်။ ကွန်းမန့်များအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိလိုလျှင် RSS 2.0 ဖြင့် တောင်းဆို၍ ရယူနိုင်သည်။ လာရင်းနေရာ သို့ ပြန်လည် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။